घर वा औद्योगिक वातावरण मा प्रजनन जनावर किनभने खाना गुणस्तर को, दायाँ आहार बनाउन धेरै महत्वपूर्ण छ जब गाई र मासु गुणस्तर उत्पादित दूध को मात्रा मा निर्भर गर्दछ। पशुधन फिड आफ्नो उमेर को आधार र दूध दिन मात्रा मा चयन हुनुपर्छ। न्यूनतम आर्थिक लागत संग अधिकतम उद्योग-प्रमुख प्रदर्शन हासिल गर्न मात्र तरिका हो।
गाई पाचन प्रणाली को एक अद्वितीय संरचना र कामकाज छ, त्यसैले यसको आहार विशेष ध्यान आवश्यक छ। पोषक राम्रो अवशोषित छन् त पेट, त्यहाँ को एक बहु-चरण पाचन छ जसमा धेरै Chambers बनेको छ। यो समूहको पशुहरू लागि यस्तो औद्योगिक उत्पादन परिणामस्वरूप विभिन्न अनाज, फिड को रसदार र कुनै न कुनै प्रकार, साथै फोहोर केहि प्रकारको रूपमा सर्वश्रेष्ठ हर्बल खाद्य छन्।
रसदार चारा बाली जसमा चिस्यान सामग्री अत्यन्तै उच्च छ प्रस्तुत गरिएको छ। यी silage मिश्रण, ताजा घाँस, केही बाली र धेरै अन्य समावेश गर्नुहोस्। हिउँदमा पशु रुचाउने, घास र पराल प्रयोग तिनीहरूले धेरै पौष्टिक कारण।
जनावर अधिकतम प्रदर्शन हासिल गर्न आवश्यक गाई को एक पौष्टिक आहार को अनिवार्य भाग अन्न फिड छन्। तिनीहरूले पोषक र खनिज macronutrients को एक ठूलो संख्या केंद्रित। यो केक संयुक्त र विभिन्न पशुधन फिड, भिटामिन र खनिज मा धनी गर्न सकिन्छ।
गाईहरु र मासु उत्पादित दूध उच्च गुणवत्ता को थियो भनेर, यो किनभने तिनीहरूले भिटामिन, ए, डी र E1 समावेश, जनावर पशु मूल को खाना पाएको धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो उद्देश्य लागि, पारंपरिक फिड हड्डी भोजन थप्नुहोस्।
मिति, फीड को निम्न प्रकार पशुपालन प्रयोग:
घास र पराल;
Humenné र twig खाना;
गाई लागि आहार कसरी बनाउने बुझ्न, तपाईं फिड प्रकार र आफ्नो पोषण गुण प्रत्येक एक विस्तृत समझ हुनुपर्छ।
हरियो चारा - यो कि Meadows र चराई मा जंगली, साथै forage बाली को एक किसिम जनावर को रुचाउने लागि विशेष हुर्किसकेका छन् मा वृद्धि घाँस छ। यो समूह खुवाउन पोषक, भिटामिन, macronutrients र पचा लिया जान्छ र पूर्ण assimilated गाई प्रशस्त छन्। खाना रूपमा सबैभन्दा ठूलो मूल्य, यो छ रूपमा एक युवा हरियो घाँस मानिन्छ यसलाई सबैभन्दा उपयोगी र पोषक, साथै घाँस विकास रूपमा आफ्नो नम्बर एकदम घट्छ समावेश गर्दछ।
चारा लागि घाँस को संरचना आधारित चयन गर्नुपर्छ। यसलाई भिटामिन, फस्फोरस, प्रोटिन र क्याल्सियम को धेरै समावेश गर्नुपर्छ। तपाईं गरिब गुणस्तर घाँस प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, जनावर जस्तै क्लोभर, मटर, alfalfa र अरूलाई रूपमा फलियां, को आहार थपियो गर्नुपर्छ। फिड को 70 किलो को वयस्क गाई रासन को दैनिक दर। जब राम्रो पोषण मासु र दूध उच्च गुणवत्ता को हुनेछ।
हिउँदमा, त्यहाँ चराई मा घाँस, त्यसैले गाई खुवाउने लागि फसल घास। यो आहार गाई को आहार मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। घास पाचन प्रणालीको सामान्य कामकाज मा सकारात्मक प्रभाव छ। घास को पोषण मूल्य कटाई लागि प्रयोग गरिएका जडीबुटी को प्रकार मा धेरै हदसम्म निर्भर छ। सबैभन्दा मूल्यवान क्लोभर, alfalfa र sainfoin छन्।
यस पोषक र खनिज को फिड मा सामग्रीको धेरै बलियो कमी नेतृत्व हुनेछ हिउँदमा पराल कटाई गर्दा, घाँस सुक्खामा छैन सम्म धेरै महत्त्वपूर्ण छ। साथै, जडीबुटी, र घास को थप भण्डारण सुखाने जब यो वर्षा मा भिजेको रही रोक्न सिफारिस गरिएको छैन, त्यसैले खाद्य विशेष ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्छ। उचित तयारी र घास को भण्डारण संग यो सबै आवश्यक पोषक र भिटामिन रहनेछ।
मूल तरकारी र Melons
गाई बीट, आलु, कद्दू, rutabaga, गाजर र केही अन्य तरकारी को ठीक फिट फरक प्रजातिहरू खुवाउन रूपमा। यी संस्कृतिका आहार हो र उच्च गुणस्तरीय दूध को प्रजनन योगदान। पशु तिनीहरूले फिड को अन्य प्रकार प्रयोग गर्न लाभदायी छ जो आफ्नो भोक, कारण किनभने, धेरै खुशी संग खान।
मूल तरकारी र Melons छैन पूर्णतया गाई लागि पूर्ण आहार बनाउन, तर विशेष गरी गाई calves पछि पहिलो महिनामा अन्य फीड ठूलो साथै हुनेछ। साथै, हिउँदमा पशुहरू खुवाउने गर्दा पशुधन फिड यी प्रकार बस बेबदल छन्। तिनीहरूले भिटामिन र खनिज को एक सानो रकम समावेश भन्ने तथ्यलाई बावजुद, तिनीहरूले धेरै राम्रो तरिकाले गाई द्वारा खाएको छैन, तिनीहरूले तैपनि दूध ठूलो पैदावार को उत्पादन गर्न योगदान र दूध गुणस्तर बढ्छ।
मूल-बाली, पशु फिड, गाजर र बीट लागि सही आलु लागि जाँदा। गाई दूध दिन्छ कति आधारमा यी उत्पादनहरु औसत दैनिक दर लगभग 20 किलो छ। पानी ठूलो रकम यी संस्कृति, शर्करा, starches र गाई गर्न आवश्यक अन्य खनिज मा निहित।
एकाग्रचित्त फिड द्वारा समावेश अनाज, चोकर, र पीठो को उत्पादन परिणामस्वरूप बर्बाद। तपाईं गाई को आहार थप्न यदि त्यसैले तिनीहरू, पोषक धेरै समावेश र दूध र मासु को पोषण गुणस्तर धेरै निकै वृद्धि भएको छ। फलियां मा केंद्रित संस्कृतिका प्रोटिनको धेरै समावेश, त्यसैले यसलाई थप दूध पैदावार दिन कि गाई जातिहरु को आहार थप्न राम्रो छ।
यस्तो जई र जौ रूपमा अनाज, किनभने तिनीहरूलाई मा carotene सामग्री अनाज भन्दा धेरै कम हो, आहार forage रूपमा वर्गीकृत छन्। त्यसैले, तपाईं पशुधन लागि मुख्य फिड रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि तिनीहरूले थप गर्नुपर्छ फलियां, भटमास, मकै र अन्य फिड, जो प्रोटिनको ठूलो रकम समावेश गर्दछ।
Humenné र twig खाना
यो समूहमा पराल चारा वसन्त बाली जो, द्वारा र ठूलो, कम गुणस्तर घास को छ पर्छ। को पराल धेरै कम पोषक, भिटामिन र फाइबर समावेश गर्छ, अझै यसलाई कम र मध्यम फलदायी क्षमता संग गाई लागि जाडो फिड रूपमा सिद्ध छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद। थप दूध उपज उत्पादन गर्ने गाई, पराल चोकर, bagasse, silage वा विभिन्न मूल तरकारी संग मिश्रित गर्नुपर्छ। यो एकदम फीड को पोषण मूल्य वृद्धि हुनेछ। गाई लागि ब्राउज forage को सन्दर्भमा, यो राम्रो जो भिटामिन पीठो बनाउन उपयुक्त पाइन शाखा छ।
यो एक उच्च पोषण मूल्य र कम मूल्य छ रूपमा Silage, धेरै क्षेत्रहरु मा गाई खुवाउने लागि व्यापक प्रयोग भएको छ। फिड यस प्रकारको पूर्ण जनावर सबै पोषक र हिउँदमा बढी र राम्रो दूध उपज उत्पादन गर्न आवश्यक खनिज पूरा गर्न सक्षम छ।
फिड यस प्रकारको समयमा प्राप्त लैक्टिक किण्वन को बन्द पोत पहुँच मा हावा देखि व्युत्पन्न विशेष स्टक। silage को उत्पादन को लागि विभिन्न बाली भन्दा माथि, Meadow घाँस, बन्दागोभी पात, सूर्यमुखी र मकै, र विभिन्न फलियां को हरियो वजन प्रयोग गर्नुहोस्। किण्वन समयमा फिड लैक्टिक एसिड र चिनी संग संतृप्त छ। एक Silo यी पदार्थ को अधिक अधिक गुणवत्ता खाना हुन मानिन्छ। एक Silo देखि निर्मित गरिएको छ के आधारमा, फीड light- वा trudnousvaivaemym हुन सक्छ। सबैभन्दा गुणस्तर संयुक्त धेरै पौष्टिक छ 1 को एक अनुपात मा मिश्रित Silos दुवै प्रकार, देखि बनेको छ जो 1 एक यस्तो फिड गर्न silage, र पुनरुत्पादन दूध गुणस्तर सकारात्मक प्रभाव छ। पनि Silo मा अन्न गर्न फाइबर यसको आवश्यक रकम सुनिश्चित र खाना थप पूरा गर्न, पशुधन खुवाउन थप गर्न सकिन्छ।
किनभने उनीहरू पशुधन अधिकतम उत्पादकत्व achieves जो पूर्ण जनावरहरूको, आहार सबै नियम, विनियम र आवश्यकताहरु गरिएका छन् संयुक्त फिड, गाई लागि फिड को सबै भन्दा बहुमुखी र उच्च गुणस्तरीय प्रकार को एक मानिन्छ। तिनीहरूले भिटामिन, खनिज र पोषक प्रति दिन वयस्क गाई द्वारा आवश्यक सर्वोत्कृष्ट सेट प्रदान गर्नुहोस्।
ड्राई कुरा को कटिबद्ध सामग्री चारा पोषण गुणहरू। फीड उच्च चिस्यान सामग्री संग आधारित उत्पादन बनाएको छ भने, सुक्खा कुरा सामग्री therein प्रति पशु शरीरको वजन 100 किलो किलोग्राम अधिक तीन भन्दा हुनुपर्छ। पशुधन एक चराई Meadow बिना गोठ मा निहित छ भने, आफ्नो रुचाउने लागि सबै भन्दा राम्रो भद्दा चारा प्रजातिहरू प्रयोग छ। फोहोर पनि उत्पादन परिणामस्वरूप, पशु फिड लागि पूर्ण अनुकूल छ। यो उच्च गुणस्तरीय पशुधन पोषण सुनिश्चित गर्न पर्याप्त हुनेछ। यस मामला मा, संयुक्त फिड को दैनिक दर मा निर्भर गर्दछ एक गाई एक दिन दिन्छ धेरै दूध कसरी। कम मा पर्याप्त udoyah5किलो फिड हुन, र एक औसत दूध उपज दर संग गाई लागि आठ किलोग्राम वृद्धि गर्नुपर्छ।
पशुधन को उचित रुचाउने बारेमा केहि शब्द
चित्रकला अप आहार - यो पशुधन को उत्पादकत्व असर सबै छैन। यसलाई सही रुचाउने शासन पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। स्कट एक दिन तीन भोजन प्रदान गर्न सिफारिस गरिएको। बिहान र दिउँसो भद्दा चारा प्रयोग खुवाउन साँझ चिस्यान को एक ठूलो रकम समावेश, बाली दिन र खुवाउन राम्रो छ मा।
यो मात्र होइन गुणस्तर र दूध को मात्रा, तर पनि सामान्य मा पशुधन को उत्पादकत्व निर्धारण देखि उच्च उत्पादकत्व संग गाई, पर्याप्त पोषण प्राप्त गर्नु पर्छ। यदि गरीब आहार यस्तो गाई सधैंभरि यसको प्रदर्शन गुमाउन सक्छ। त्यसैले यो गाई खाना जवान घाँस मा पायो आफ्नो गर्मी, को Meadow मा चराई धेरै महत्त्वपूर्ण छ, र यो भिटामिन, खनिज र microelements मा खाना र खाना धनी समावेश गरिनेछ जो जाडो मा जनावर, को लागि एक गुणवत्ता आहार सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
को जाडो चिसो मा ताजा तरकारी: को बालकनी मा खीरे बढ्दै
घरेलु: आफ्नो हातमा उच्च ओछ्यानमा
प्रकृति, उद्देश्य, उद्देश्य, संस्था, कार्यान्वयन, प्रयोग गर्नुहोस्: पूर्वप्राथमिक र प्राथमिक विद्यालय बच्चाहरु को प्रशिक्षण गर्न भिन्नता दृष्टिकोण। सिक्ने एउटा भिन्नता दृष्टिकोण - यो छ ...
Offtopic - यो धोखा छ वा trolls batthort Nuba?
Eccentric - के हो?
को infield को सौन्दर्य र सान्त्वना। प्रजनन चढाई गुलाब